Mommma Mo Werɛ Mmfi sɛ Mobɛda Ayamye Adi Akyerɛ Ahɔho—Hebrifo 13:2 | Adesua
“Mommma mo werɛ mmfi ahɔhoyɛ [nea ɛkyerɛ ne, ayamye a wɔda no adi kyerɛ ahɔho.]”—HEB. 13:2.
NNWOM: 124, 79
Adɛn nti na ɛho behia sɛ yɛsesa adwene a yɛwɔ wɔ ahɔho ho?
Wohwɛ sɛnea Boas ne Rut dii no a, dɛn na Boas yɛe a ɛkyerɛ sɛ na ɔwɔ adwene a Yehowa wɔ wɔ ahɔho ho no bi?
Yɛbɛyɛ dɛn ada ayamye adi akyerɛ ahɔho?
1, 2. (a) Ɔhaw bɛn na ahɔho pii hyia nnɛ? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.) (b) Asɛm bɛn na ɔsomafo Paulo kae sɛ ɛnsɛ sɛ yɛn werɛ fi, na nsɛmmisa bɛn na ɛno ma ɛsɔre?
BƐYƐ mfe 30 ni na Osei  fi Ghana koduu Europa. Saa bere no, na ɔnyɛ Ɔdansefo. Ɔkae sɛ: “Ankyɛ na mihui sɛ obiara nnwen me ho. Wim tebea no nso, na minhyiaa bi da. Bere a mifii wimhyɛn gyinabea hɔ no, awɔw dee me araa ma mifii ase sui.” Ná Osei nte ɛhɔ kasa no, enti bɛboro afe ná onyaa adwuma pa biara nyɛe. Ná n’abusuafo nso mmɛn no, enti na wayɛ ankonam, na na n’ani agyina wɔn paa.
2 Wo de susuw ho hwɛ. Sɛ ɛyɛ wo a, dɛn na ɛhɔfo yɛ ma wo a anka w’ani begye? Ɛmfa ho ɔman a wufi mu ne wo honam ani hwɛbea no, sɛ wokɔ Ahenni Asa so na anuanom tew wɔn anim ma wo akwaaba a, anka wo koma rentɔ wo yam? Nokwasɛm ne sɛ, Bible ka kyerɛ nokware Kristofo nyinaa sɛ: “Mommma mo werɛ mmfi ahɔhoyɛ.” Wei kyerɛ sɛ, ɛsɛ sɛ wɔda ayamye adi kyerɛ ahɔho. (Heb. 13:2) Enti ma yensusuw nsɛmmisa a edidi so yi ho: Yehowa bu ahɔho sɛn? Adɛn nti na ɛho behia sɛ yɛsesa adwene a yɛwɔ wɔ ahɔho ho? Na yɛbɛyɛ dɛn aboa wɔn a wofi ɔman foforo so aba yɛn man mu no ama wɔn ani aka wɔ yɛn asafo mu?
SƐNEA YEHOWA BU AHƆHO
3, 4. Sɛnea Exodus 23:9 kyerɛ no, sɛn na na Onyankopɔn hwɛ kwan sɛ ne nkurɔfo ne ahɔho bedi, na adɛn ntia?
3 Bere a Yehowa gyee ne nkurɔfo fii Egypt no, ɔmaa wɔn mmara bi. Ná mmara no hwehwɛ sɛ Israelfo no da ayamye soronko adi kyerɛ nnipa pii a wɔnyɛ Israelfo a wɔne wɔn fi Egypt kɔe no. (Ex. 12:38, 49; 22:21) Esiane sɛ nkurɔfo ntaa ne wɔn a wofi ɔman foforo so nni no yiye nti, Yehowa fi ɔdɔ mu yɛɛ nhyehyɛe maa saa nkurɔfo no. Nhyehyɛe no baako ne sɛ, na ahɔho betumi akɔsesaw nnɔbae ase.—Lev. 19:9, 10.
4 Ná anka Yehowa betumi aka no denneennen sɛ Israelfo no nnya obu mma ahɔho, nanso wanyɛ saa. Mmom no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wonhu ahɔho mmɔbɔ. (Kenkan Exodus 23:9.) Ná Israelfo no ‘nim sɛnea ɔhɔho kra te.’ Bere a Egyptfo no mfaa Hebrifo anaa Israelfo no nyɛɛ nkoa mpo no, ɛbɛyɛ sɛ na wɔmpɛ sɛ wɔne Hebrifo no bɔ efisɛ na ɛsono Egyptfo no honam ani hwɛbea ne wɔn som. (Gen. 43:32; 46:34; Ex. 1:11-14) Bere a Israelfo no yɛ ahɔho no, Egyptfo no dii wɔn ani paa, nanso Yehowa ka kyerɛɛ Israelfo no sɛ wommu ɔhɔho “sɛ kuromanni.”—Lev. 19:33, 34.
5. Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛadwen nnipa a wofi aman foforo so ho sɛnea Yehowa dwen wɔn ho no?
5 Ɛnnɛ nso, Yehowa dwen nnipa a wɔatu aba yɛn man mu na wɔba yɛn asafo nhyiam ase no ho. (Deut. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Sɛ yedwinnwen ɔhaw a wɔrefa mu te sɛ nnipa mu nyiyim anaa kasa foforo a ɛsɛ sɛ wosua ho a, ɛbɛma yɛahwehwɛ akwan a yɛde bɛda ayamye ne tema adi akyerɛ wɔn.—1 Pet. 3:8.
ƐHO HIA SƐ YƐSESA ADWENE A YƐWƆ WƆ AHƆHO HO ANAA?
6, 7. Dɛn na ɛma yehu sɛ tete Kristofo no suaa sɛnea wɔbɛko atia nnipa mu nyiyim a na agye ntini wɔ wɔn bere so no?
6 Ná ɛsɛ sɛ tete Kristofo no sua sɛnea wɔbɛko atia nnipa mu nyiyim a na agye ntini wɔ Yudafo no mu no. Pentekoste afe 33 Y.B. no, Kristofo a wɔwɔ Yerusalem no daa ahɔhoyɛ adi kyerɛɛ nnipa a wofi aman ahorow so a na wɔabɛyɛ Kristofo no. (Aso. 2:5, 44-47) Ɔdɔ a Yudafo a wɔabɛyɛ Kristofo no daa no adi kyerɛɛ wɔn mfɛfo gyidifo no ma yehu sɛ, sɛ yɛka “ahɔhoyɛ” a, na wonim nea ɛkyerɛ ankasa. Ɛno ne “ayamye a wɔda no adi kyerɛ ahɔho.”
7 Nanso, bere a tete Kristofo asafo no renyin no, nnipa mu nyiyim ho asɛm bi sɔree. Yudafo a wɔka Hela kasa no nwiinwii sɛ wɔnhwɛ wɔn akunafo yiye. (Aso. 6:1) Nea ɛbɛyɛ na wɔasiesie asɛm no, asomafo no paw mmarima nson sɛ wɔnhwɛ ma obiara nnya nea ohia. Ná saa mmarima no nyinaa kura Helafo din. Enti ebetumi aba sɛ na asomafo no pɛ sɛ woyi baabi a obi fi ho wontwiwontwi biara a ɛbɛyɛ sɛ na ɛwɔ tete Kristofo no mu no fi hɔ.—Aso. 6:2-6.
8, 9. (a) Dɛn na ebetumi ama yɛahu sɛ yenni afoforo ho adwempa anaasɛ yɛde baabi a yefi hoahoa yɛn ho? (b) Dɛn na ɛsɛ sɛ yetu ase fi yɛn komam? (1 Pet. 1:22)
8 Sɛ yenim oo, sɛ yennim oo, yɛn mu biara amammerɛ da ne koma so paa. (Rom. 12:2) Afei nso, ebia yɛte sɛ yɛn afipamfo, wɔn a yɛne wɔn yɛ adwuma, anaa yɛn sukuufo keka wɔn a ɛsono ɔman a wofi mu, wɔn a ɛsono abusua a wofi mu, anaa wɔn a ɛsono wɔn honam ani hwɛbea ho nsɛm bi a ɛmfata. Nsɛm a ɛte saa no, ɛyɛ a ɛka yɛn sɛn? Na sɛ obi de ɔman a yefi mu di yɛn ho fɛw na ebia ɔka yɛn amammerɛ bi ho asɛm gugu mu a, dɛn na yɛyɛ?
9 Bere bi, na ɔsomafo Petro nni wɔn a wɔnyɛ Yudafo ho adwempa. Nanso, nkakrankakra ɔbɔɔ mmɔden yii saa adwene no fii ne koma mu. (Aso. 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Yɛn nso, sɛ yehu sɛ yenni afoforo ho adwempa anaasɛ yɛde baabi a yefi hoahoa yɛn ho a, ɛsɛ sɛ yɛyere yɛn ho tu adwene a ɛte saa ase fi yɛn koma mu. (Kenkan 1 Petro 1:22.) Yebetumi adwinnwen saa nokwasɛm yi ho. Ɛne sɛ, ɛmfa ho ɔman a yefi mu no, yɛn nyinaa yɛ nnipa a yɛtɔ sin, na yɛn mu biara nni hɔ a ɔfata nkwagye. (Rom. 3:9, 10, 21-24) Ɛnde, adɛn nti na ɛsɛ sɛ yenya adwene sɛ yɛsen afoforo? (1 Kor. 4:7) Ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa nya ɔsomafo Paulo adwene no bi. Ɔka kyerɛɛ ne mfɛfo Kristofo a wɔasra wɔn no sɛ, ‘wɔnnyɛ ananafo ne ahɔho bio, na mmom wɔyɛ Onyankopɔn fiefo.’ (Efe. 2:19) Sɛ yɛyere yɛn ho sɛ yebenya wɔn a ɛsono baabi a wofi ho adwempa a, akyinnye biara nni ho sɛ, ɛbɛboa yɛn ma yɛahyɛ nipasu foforo no.—Kol. 3:10, 11.
SƐNEA YƐBƐDA AYAMYE ADI AKYERƐ AHƆHO
10, 11. Wohwɛ sɛnea Boas ne Moabni Rut dii no a, dɛn na Boas yɛe a ɛkyerɛ sɛ na ɔwɔ adwene a Yehowa wɔ wɔ ahɔho ho no bi?
10 Sɛnea Boas ne Moabni Rut dii no ma yehu sɛ na Boas wɔ adwene a Yehowa wɔ wɔ ahɔho ho no bi. Bere a Boas kɔɔ n’afuw mu wɔ otwabere mu sɛ ɔrekɔhwɛ wɔn a wɔretwa ne nnɔbae no, ohui sɛ ɔbea mmɔdenbɔfo bi di n’adwumayɛfo no akyi resesaw nnɔbae no ase. Boas hui sɛ ɔbea no yɛ ɔhɔho. Ɛwom sɛ na ɔbea no wɔ hokwan sɛ ɔsesaw nnɔbae ase de, nanso odii kan srɛɛ kwan ansa na ɔreyɛ saa. Bere a Boas tee saa no, oyii ne yam maa kwan sɛ wonyiyi nnɔbae no bi ngu fam mma Rut nsesaw.—Kenkan Rut 2:5-7, 15, 16.
11 Nkɔmmɔ a Boas ne Rut bɔe no ma yehu paa sɛ na Boas dwen Rut ne asetena a emu yɛ den a na ɔrefam sɛ ɔhɔho no ho. Ade baako a ɛma yehu saa ne sɛ, Boas ka kyerɛɛ Rut sɛ onni ne mmabaa no akyi sɛnea ɛbɛyɛ a mmarima a wɔreyɛ adwuma no renteetee no. Ɛwom sɛ na Rut nka apaafo no ho de, nanso Boas hwɛ ma onyaa aduan ne nsu. Afei nso, Boas anka asɛm biara a ɛkyerɛ sɛ obuu ɔbea hianiwa no animtiaa. Mmom, ɔkaa ne koma too ne yam.—Rut 2:8-10, 13, 14.
12. Sɛ yɛda ayamye adi kyerɛ ahɔho a wofi ɔman foforo so no a, ɛbɛboa wɔn sɛn?
12 Adɔe a Rut yɛɛ n’asebea Naomi no kaa Boas koma, na n’ani gyee ho nso sɛ Rut abɛyɛ Yehowa somfo. Ayamye a Boas daa no adi no yɛ adɔe a Yehowa ankasa daa no adi kyerɛɛ ɔbea a na ‘wabɛhyɛ Israel Nyankopɔn no ntaban ase no.’ (Rut 2:12, 20; Mmeb. 19:17) Saa ara nso na ɛnnɛ, sɛ yɛtew yɛn anim kyerɛ “nnipa ahorow nyinaa” a, ɛbɛboa wɔn ama wɔahu nokware no, na wobehu sɛ Yehowa dɔ wɔn paa.—1 Tim. 2:3, 4.
Sɛ ahɔho ba Ahenni Asa so a, ɛyɛ a yɛtew yɛn anim ma wɔn akwaaba anaa? (Hwɛ nkyekyɛm 13, 14)
13, 14. (a) Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yebekyia ahɔho a wɔba Ahenni Asa so no? (b) Sɛ ɛyɛ den ma wo sɛ wo ne nnipa a ɛsono wɔn amammerɛ bɛbɔ nkɔmmɔ a, dɛn na ɛbɛboa wo ama woatumi ayɛ saa?
13 Sɛ yehu sɛ ahɔho a womfi yɛn man mu aba yɛn Ahenni Asa so a, ɛsɛ sɛ yɛtew yɛn anim kyia wɔn. Sɛ yɛyɛ saa a, na yɛreda ayamye adi akyerɛ wɔn. Ebia yɛahyɛ no nsow sɛ ɛtɔ da a, ahɔho a wɔatu aba yɛn man mu foforo no fɛre ade na wɔmpɛ sɛ wɔbɛka akɔ afoforo ho. Ebia ntetee a wonyae anaa sɛnea nkurɔfo mfa wɔn nyɛ hwee nti, wɔte nka sɛ wɔmfata sɛ wɔne nnipa a wofi aman foforo so anaa ɛsono wɔn honam ani hwɛbea no bɛbɔ. Enti ɛsɛ sɛ yedi kan tew yɛn anim kyerɛ wɔn, na yɛma wohu sɛ yedwen wɔn ho. Sɛ wowɔ JW Language app no bi wɔ mo kasa mu a, ebetumi aboa wo ama woahu sɛnea wode wɔn a wɔaba wo man mu foforo no kasa bekyia wɔn.—Kenkan Filipifo 2:3, 4.
14 Ebia ɛyɛ wo den sɛ wo ne wɔn a ɛsono wɔn amammerɛ bɛbɔ nkɔmmɔ. Nea ɛbɛboa wo ama woatumi abɛn nnipa a wɔte saa ne sɛ wubedi kan aka wo ho asɛm kakra akyerɛ wɔn. Ɛrenkyɛ koraa wubehu sɛ, sɛɛ na mo adwene hyia wɔ nneɛma pii ho sen sɛnea na wususuw. Afei nso, wubehu sɛ sɛɛ amammerɛ biara wɔ nea eye wɔ ho ne nea enye wɔ ho.
MOMMA OBIARA KOMA NTƆ NE YAM
15. Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛate ahɔho a wɔresua ɔman foforo mu asetena no ase yiye?
15 Sɛ wopɛ sɛ afoforo a wɔaba asafo no mu koma tɔ wɔn yam a, bisa wo ho sɛ, ‘Sɛ me na makɔ ɔman foforo bi so a, dɛn na wɔyɛ ma me a anka m’ani begye paa?’ (Mat. 7:12) Nya wɔn a wɔresua ɔman foforo so asetena no ho abotare. Ahyɛase no, ebia yɛrente wɔn nneyɛe ne sɛnea wosusuw nneɛma ho ase yiye. Nanso, sɛ́ anka yɛbɛhwɛ kwan sɛ wɔbɛyɛ wɔn ade te sɛ yɛn ara no, adɛn nti na yennye wɔn ntom sɛnea wɔte no ara?—Kenkan Romafo 15:7.
16, 17. (a) Dɛn na yɛyɛ a, ɛbɛma yɛatumi abɛn wɔn a ɛsono wɔn amammerɛ no paa? (b) Nneɛma a ɛho hia bɛn na yebetumi ayɛ de aboa ahɔho a wɔwɔ yɛn asafo mu no?
16 Wɔn a wɔatu aba yɛn man mu no, sɛ yesua wɔn man ne wɔn amammerɛ ho ade a, ɛbɛma ayɛ mmerɛw ama yɛn sɛ yɛne wɔn bɛbɔ. Sɛ yɛreyɛ abusua som a, yebetumi de bere no bi ayɛ ahɔho a wɔwɔ yɛn asafo ne yɛn asasesin mu no amammerɛ ho nhwehwɛmu. Ade foforo nso a ebetumi ama yɛabɛn wɔn a ɛsono wɔn amammerɛ paa ne sɛ yɛbɛto nsa afrɛ wɔn aba yɛn fie na yɛne wɔn ato nsa adidi. Yehowa ‘abue ɔpon a ɛkɔ gyidi mu ama amanaman no.’ Enti yɛn nso, so yɛrentumi mmue yɛn apon mma ahɔho a “yɛne wɔn bɔ abusua wɔ gyidi mu no”?—Aso. 14:27; Gal. 6:10; Hiob 31:32.
Nnipa a wɔatu afi aman foforo so aba yɛn man mu no, ɛyɛ a yeyi yɛn yam da ahɔhoyɛ adi kyerɛ wɔn? (Hwɛ nkyekyɛm 16, 17)
17 Sɛ yɛne mmusua a wɔatu aba yɛn man mu no taa bɔ a, ɛbɛma yɛahu sɛnea wɔrebɔ mmɔden sɛ wobesua yɛn amammerɛ no. Ɛbɛma yɛahu nso sɛ, ebia ehia sɛ yɛboa wɔn ma wotumi sua kasa a yɛka no. Bio nso, yebetumi akyerɛ wɔn kwan akɔ nnwumakuw a wobetumi aboa wɔn ama wɔanya baabi pa atena anaa wɔanya adwuma pa ayɛ nkyɛn anaa? Sɛ yɛyɛ saa a, ebetumi aboa yɛn yɔnko gyidini no paa.—Mmeb. 3:27.
18. Obu ne anisɔ ho nhwɛso bɛn na wɔn a wɔatu akɔtena obi man so no betumi asuasua nnɛ?
18 Dɛn na wɔn a wɔatu akɔtena obi man so no nso betumi ayɛ? Wobetumi abɔ mmɔden sɛ wobesua ɔman a wɔakɔ so no mu asetena. Rut yɛɛ wei ho nhwɛso pa. Nea edi kan, ɔsrɛɛ kwan ansa na ɔresesaw nnɔbae no ase. Saa a ɔyɛe no kyerɛ sɛ, na obu ɔman a wakɔ mu no amammerɛ. (Rut 2:7) Wannya adwene sɛ esiane sɛ ɔyɛ ɔhɔho nti obetumi akɔsesa nnɔbae ase a ɔremmisa hokwan ansa. Nea ɛto so mmienu ne sɛ, bere biara a obi yɛɛ biribi pa maa no no, ɔkyerɛɛ ho anisɔ. (Rut 2:13) Sɛ wɔn a wɔatu akɔtena obi man so no da suban pa a ɛte saa adi a, ɛbɛma ɔmanfo no abu wɔn, na saa ara na wɔn mfɛfo gyidifo nso bebu wɔn.
19. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛtew yɛn anim ma ahɔho a wɔwɔ yɛn ntam no?
19 Ɛyɛ yɛn anigye paa sɛ Yehowa adom nnipa a wofi mmaa nyinaa ama wɔanya hokwan ate asɛmpa no. Bere a saa nnipa yi wɔ wɔn man mu no, ebia wɔannya hokwan ne Yehowa nkurɔfo ansua Bible anaa wɔne wɔn ankɔ asafo nhyiam. Enti seesei a wɔanya hokwan ne yɛn hyiam som no, munnye nni sɛ ɛsɛ sɛ yɛboa wɔn ma wɔn ani ka? Ɛwom, ebia yɛrentumi mma wɔn nsa nka honam fam nneɛma a wohia nyinaa anaa yɛrentumi nyɛ wɔn mmoa pii, nanso sɛ yɛda ayamye adi kyerɛ wɔn a, na yɛresuasua ɔdɔ a Yehowa wɔ ma wɔn no bi. Yɛyɛ nkurɔfo a ‘yɛresuasua Onyankopɔn,’ enti momma yɛnyɛ nea yebetumi biara ntew yɛn anim nnye ahɔho a wɔabɛka yɛn ho no.—Efe. 5:1, 2.
^  (nkyekyɛm 1) Wɔasesa din no.